AfricArXiv - Shabakadda marin-u-helka Open Open ee Afrika
Bogga pan-African Open Access
Akhri wax dheeraad ahKu-biirin
AfrikArXiv waa keyd dijitaal ah oo bulshada ay hogaamiso oo loogu talagalay cilmi baarista Afrika, kana shaqeysa sidii loo dhisi lahaa bakhaar aqoon-furan oo ay leeyihiin Afrikaanka; a aqoon wadaag ee shaqooyinka aqoonyahanada Afrikaanka ah si ay u kobciyaan Renaissance Afrika. Waxaan iskaashi la sameyneynaa adeegyada kaydinta cilmiga ee la aasaasay si loo helo barxad loogu talagalay saynisyahannada Afrikaanka ah ee anshax kasta oo ay ku soo bandhigaan natiijooyinka cilmi-baaristooda ayna kula xiriiraan cilmi-baarayaasha kale ee qaaradda Afrika iyo adduunka.
Kaydso fadhigaaga kulan xog -waraysi oo hoose kooxdayada ama nagala soo xidhiidh info@africarxiv.org.
Saham soo gudbinta la aqbalay ee ku saabsan meelaha keydka ah ee soo socda:
Soo gudbi shaqadaada
Waad ku soo gudbin kartaa qoraal gacmeedyo horudhac ah, daabacaadyo dheeri ah kadib, bandhigyo, xog ururin, iyo qaabab kale oo natiijooyinka cilmi baarista ah midkoodna keyd wadaageyaashayada Soo ogow sida taas loo sameeyo at info.africarxiv.org/submit/.
Waxaan kor u qaadeynaa helitaanka natiijada cilmi baarista Afrika iyadoo loo shaqeynayo si waafaqsan mabaadi'da iyo ururada soo socda:
Mabaadi'da DARYEELKA ee Maamulka Xogta Asaliga ah
Baaqa San Francisco ee ku saabsan Qiimaynta Daraasaadka
Helsinki Initiative oo ku saabsan luuqadaha kala duwan ee isgaarsiinta cilmiga
Qaab-dhismeedka Beesha ee COAR ee Dhaqanka Wanaagsan ee Keydadka
>> Akhri wax dheeraad ah ku saabsan AfrikaArXiv.
Soocelinta deg deg ah aqriso: sida ay wax walba ku bilaabeen https://t.co/KOUOhq7sYd
Waxaan bilownay AfricanArXiv bishii Juun 2018 annagoo ka duulayna buugga dib-u-dejinta ee Afrikaanka oo leh ujeedooyin dhowr ah oo maskaxda lagu hayo: pic.twitter.com/cogcBck5ux
- AfrikArXiv (@AfricArxiv) February 20, 2020
La wadaag cilmi-baaristaada luqadaha Afrikaanka
Natiijooyinkaaga ka dhig kuwo la tilmaami karo oo codso liisanka CC-BY
Kor Deeq waxbarasho furan, il furan iyo heerar furan
Wararka ku saabsan marin-u-helka furan ee Afrika
Soo ogow cilmi-baaris badan oo Afrikaan ah
AfricanArXiv waxay diyaarinaysaa OSF
Buug-gacmeedyo diyaarin ah oo lagu daabacay AfricArXiv iyada oo loo marayo Open Science Framework (OSF).
Xawaaladaha Baadhista Dijitaalka ah
Liiska Xawaaladaha ku yaal qaaradda Afrika.
Journals-ka Afrikada Online
Maktabadda tooska ah ee joornaalka loo dhigo, joornaallada aqoonyahannada ee Afrika lagu daabacay.
Cilmi baarista Furan ee AAS
Meel loo adeegsado daabacaadda deg degga ah iyo dib-u-fiirinta fur-furka baarayaashu.
'Afrika' Khariidadda Aqoonta Furan
Natiijooyinka raadinta macnaha guud ee ku saleysan metadata iyo ereyada muhiimka ah oo lagu calaamadeeyay 'Afrika'.
Natiijooyinka gaarka loo leeyahay ee BASE ee Afrika
Mashiinka raadinta nugul gaar ahaan ilaha webka tacliinta.